Baolina kitra - Amboaran’ny CAF :: Mampitandrina momba ny fandehanana any Afrika Atsimo ny minisitera • AoRaha
Baolina kitra – Amboaran’ny CAF Mampitandrina momba ny fandehanana any Afrika Atsimo ny minisitera
Mbola tsy nahazo fampandrenesana avy any amin’ny tompon’andraikitry ny Kaonfederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra (CAF) na ny minisiteran’ny Fanatanjahantena eto Madagasikara na ny klioba amin’ny baolina kitra Cnaps Sport, izay tokony hiatrika ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, hatao atsy Afrika Atsimo amin’ity herinandro ity. Tokony hiatrika ny TS Galaxy (Afrika Atsimo) ireo mpilalao malagasy amin’ny 13 septambra ho avy izao any Afrika Atsimo. Iaraha-mahalala anefa fa mbola misavorovoro ny fandriampahalemana any amin’ity firenena ity, amin’izao fotoana izao noho ny famonoana ireo vahiny any an-toerana. Mampitandrina manoloana ny toe-draharaha any an-toerana ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena eto amintsika.
“Izaho mihitsy no niantso mba hanafoanana ny lalao ara-pirahalahina tokony hataon’ny Barea tamin’ny Bafana Bafana, tany Afrika Atsimo. Mbola tsy milamina mihitsy any an-toerana amin’izao fotoana izao. Amiko, miteny aho amin’ny maha tale jeneralin’ny Fanatajahantena ahy, fa mbola tsy afaka mandefa mpilalao any mihitsy izahay ho fiarovana azy ireo”, hoy Rakotozafy Rosa, tale jeneralin’ny Fanatajahantena.
Mbola tsy fantatra, araka izany, na ho foana na hihemotra ny lalao tokony hataon’ny TS Galaxy sy ny Cnaps Sport, amin’ny zoma ho avy izao. “Hatreto mbola tsy nahazo vaovao izahay mikasika an’io lalao io. Vonona hatrany ny ekipa na eo aza izany olana rehetra izany”, hoy fosiny Andriambololona Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport.
Mbola lalao mandroso ny fihaonana amin’ny zoma ho avy izao. Hotanterahina amin’ny 27 septambra kosa ny lalao miverina eo amin’ny ekipa roa tonta. Ho tafakatra amin’ny fifaninanam-bondrona avy hatrany ny Cnaps Sport raha tafavoaka mpandresy manoloana ny klioba afrikanina tatsimo.
Atletisma :: Mila mandranto traikefa any ivelany ireo mpikatroka malagasy